अध्याय १ 3252 ०3253-०XNUMX एक डिश सर्वश्रेष्ठ सेवा चिसो उपन्यास | XperimentalHamid
अध्याय १ 3252 ०3253-०XNUMX एक डिश सर्वश्रेष्ठ सेवा चिसो उपन्यास
जुलाई 3, 2021 जुन 19, 2021 by हिसम उल्लाह
पढ्नुहोस् अध्याय ०१ - ०। उपन्यासको एक डिश सर्वश्रेष्ठ सेवा चिसो नि: शुल्क अनलाइन।
पछिल्लो अद्यावधिकहरूका लागि हामीलाई अनुसरण गर्नुहोस्
उनले ओवेनलाई भूतले झैं हेरे र मनमा श्राप पाए।
ओवेन, यो कुकुर चीज, के तपाई साँच्चिकै श्रृंगार गर्न सक्नुहुन्छ?
ड्र्यागन प्रभुले यी शब्दहरू कहिले भने?
यो यति खास छ, जब तपाईं बकवास कुरा गर्नुहुन्छ तपाईं लाजमा पर्नुहुन्न।
जहाँसम्म कि उसलाई थाहा थियो कि इरभि बकवास कुरा गर्दैछ, गायाले यसलाई व्याख्या गर्न सक्दैन।
उनले देख्न सक्थे कि जापानी चन्द्र रीडिंग ईश्वरको स्पष्ट रूपमा उनीहरूको ड्र्यागन प्रभुसँग नजिकको सम्बन्ध थियो।
ओवेनले यी शब्दहरू भनेका थिए, स्पष्ट रूपमा ती दुई बीचको मित्रतालाई गहिरो बनाउन।
अप्रत्याशित रूपमा, ओवेनको शब्दहरू उनको अगाडी महिलाको नरम भागलाई छोएको देखिन्थ्यो।
मूल महिमा तुरुन्तै हरायो।
सुन्दर आँखामा केही कोमलता प्रकट भयो।
विशेष गरी त्यस वाक्यमा, उनी व्यक्ति हुन् जसलाई उनले ख्याल राख्छन्, र यसले उनको अगाडी महिलालाई डगमगाएको महसुस गर्दछ।
यदि त्यहाँ हजारौं पर्वत र नदीहरू अलग छन् भने, जबसम्म तपाईंलाई थाहा छ कि त्यहाँ अझै व्यक्तिहरू छन् जसले आफैंलाई हेरचाह गरिरहेका छन्, तब तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुनेछ।
"हामी यसको बारेमा कुरा गरौं, उहाँ यहाँ के गर्न आउनुभएको छ?" पछि
संक्षिप्त स्पर्श, मून्रेडर फेरि आफ्नो पुरानो चिसो र राजसी उपस्थितिमा फर्के।
इरिvingले तुरुन्त जवाफ दिएन, तर दुवै हातले एक नाजुक गिफ्ट बक्स प्रस्ताव गर्‍यो।
"यो हो?" चंद्रमा भगवान लियू भौहें एक सानो झिल्का।
ओवेनले जवाफ दिए: "चन्द्रमाले परमेश्वर खोल्नुहुन्छ र देख्नुहुन्छ।" जबकि
बोल्दै, उपहार बाकस चन्द्र भगवान आस्तीन को एक तरंग संग उनको हात मा पहिले नै थियो।
नाजुक सेतो जेड औंलाहरू बिस्तारै हल्का बलका साथ खुल्यो।
मैले देखें कि उपहार बक्समा एक नाजुक र सुन्दर रातो तारा छ।
यस रात जब उनले यो रातो डोरी देखे, लूनाको नाजुक शरीर अचानक काँपिरहे। सक्कली सुन्दर अनुहार ना eye्गो आँखाले देख्न सक्ने गतिमा हेर्नुहोस्।
"ऊ ... उसको मतलब के हो?"
"मैले उनलाई ती तीन डोरीहरू फिर्ता दिएँ।"
"उनले मलाई किन फिर्ता गरे?"
लुनाले चिसोसँग सोधिन्, उनले आफ्ना भावनाहरू नियन्त्रण गर्न खोजे, तर उनको आवाजमा। असन्तुष्टि को त्यो स्पर्श अझै जीवन्त छ।
चन्द्रमाको प्रश्नको सामना गर्दै, ओवेन नम्र र नम्र थिएनन्, र गहिरो आवाजमा जवाफ दिए।
मलाई माफ गरिदेउ ।" "आउनु भन्दा पहिले हामीलाई यो तपाईलाई फिर्ता गर्नु भन्दा पनि मेरो घरको अजि .्गरकर्मीसँग थोरै शब्दहरू छन्, मलाई यसलाई हारुहीको मिस यिंग्युमा लैजानुहोस्।"
“मान्छेहरू यो संसारमा भेट्छन्, भाग्य। तीन जन्म। "
"यू, तिमी चन्द्र देवता हो, र म प्यारो होइन। म कसरी चू टियानफान तपाईको तीन जन्मको ब्रोकेड स्वीकार्न सक्छु? "
"अब यसले तपाइँलाई तपाइँलाई यो फिर्ता फिर्ता दिन्छ। “
म आशा गर्छु कि तिमीले जतिसक्दो चाँडो आफ्नो प्रियजनलाई भेट्न सक्छौ र तिमीसँगै छौ, ताकि तिम्रो जीवनमा एक्लो नहोऊ। ”
"यो धर्मनिरपेक्ष त्सिंगुआ, कियानशानको सुन्दर दृश्य हो, अरुसँग हुनु राम्रो हुन्छ।"
ओवेनले मार्कको स्वर नक्कल गरे जब उनले यो भने। एक आचरण संग, उनले बिस्तारै भने।
ढिलो शब्दहरूमा, त्यहाँ अकल्पनीय भावनाहरू छन्।
छेउमा रहेको गैयाले स्पष्ट देख्यो कि उसको अगाडि रहेको कुनै देशका देवताहरूको धुलाइ र रमणीय आँखा रातो भएको थियो।
हावा हल्का ढल्किन्छ र हरियो पानी लामो बग्दछ।
ओवेनका शब्दहरू अझै बाँकी।
"Yue'er, मालिक र नोकर, म यसको बारेमा सोचे, तर यो एक अर्कालाई पठाउन असभ्य थियो।"
"ठिक छ, यो अवसर लिनुहोस्, मालिकले तपाईंलाई स्वतन्त्रता दिनेछ।"
"आज पछि, तपाईं र मेरो मालिक र नोकर बीचको मित्रता अन्त्य हुनेछ।"
“यदि म, चु टियानफान, भविष्यमा मेरो भाग्य लिएर फर्केर आएँ भने, म तपाईंलाई फेरि भेट्न पाउँदा भाग्यशाली हुनेछु, र म तपाईंलाई जिन्लान बनाउनेछु।
मेरो चिनारी भाइ र बहिनी हुन योग्यको छ। ” "खजाना, मायालु ~"
शान्त बस, चुप लाग।
लामो समय को लागी शान्त
महामहिम तीन ईश्वर, यस समयमा मौनता छ।
ओवेनले मार्कका शब्दहरू रिले गरे, जुन चुपचाप गूँजियो।
यो सुने पछि, उनको अगाडी महिला लामो समय को लागी चुप लागी, स्थान मा रोकी, र चुप रही।
ओवेनले यी भने पछि, गायया हजारौं शब्दहरू अनुसरण गरे, र फेरि गहिरो आवाजमा भने।
"थप रूपमा, अजि .्गरका मालिकसँग जापानी राज्य युएक्सुका देवताहरूलाई दिनका लागि केहि थप शब्दहरू छन्।"
"युनर तपाईको जापानी राज्यको एक व्यक्ति भएता पनि यो मेरो चुटियान नश्वरको व्यक्ति हो।"
“तपाईं उनको शरीर कब्जा। म छोड्न सक्छु ""
तर यदि तपाईं तिनीहरूको आत्मा मेटाउनुहुन्छ, यसको चेतनामा। I Chutian जहाँ निलो आकाश छ, तिनीहरूको जीवनको सर्वश्रेष्ठमा, यसले तपाईंलाई काट्छ! “
अन्तहीन घमण्ड संग, मफल्ड गर्जन जस्तो आवाज, कुनै शेनवेई प्रदर्शन गरे।
"मेरो मालिकको सन्देश यहाँ छ।"
"म अब यहाँ बस्दिन, छोडिदिनुहोस्।"
"तपाईको महामहिम चन्द्रमा भगवान, अलविदा!"
यो भन्नुभएपछि, ताईया र अरुहरू तुरुन्तै यहाँ बस्न सकेनन्। सकियो र बाँया
मार्कको अघिल्लो अर्डरका अनुसार ती दुईजनाले तुरुन्तै मार्कलाई भेट्न चुमेन माउन्टेनमा भाग्नु पर्ने भयो।
यद्यपि, ताइया र अरु धेरै समयको लागि छोडेर सान्सेन प्यावेल बाहिर, चन्द्रमा परमेश्वर अझै लामो समयसम्म अनुपस्थित रहनुभयो, उही स्थानमा रहनुभयो र त्यहाँ लामो समयसम्म कुनै आवाज आएको थिएन।
दुई महान मास्टरहरूको लागि जो अब चाँहि भगवानले घाइते बनाएका थिए, उनीहरूले पीडाको प्रतिरोध गरे र यस समयमा भूमिमा घुँडा टेकेका थिए।
ऊ चिसो जस्तै देखिन्थ्यो, र उसले पनि एक शब्द भन्न हिम्मत गरेन।
चन्द्रमा परमेश्वर सर्नुभएन, त्यसैले स्वाभाविक रूपमा तिनीहरू सर्न आँट गरेनन्।
अन्तमा, कतिन्जेल थाहा नहुँदा, लुनाको सुस्त शरीर काम्दै गयो।
गाइया र अन्यहरू छोड्दै गरेको दिशालाई हेर्दै, चन्द्रमा परमेश्वर पनि बोल्न नसक्ने गरी हुनुहुन्थ्यो, तर फर्कनुभयो र तीन भगवान मंडपमा प्रवेश गर्नुभयो।
मुख्य हलमा, पुरानो काठ सुगन्धित।
पुरानो वेदी समयका निशानहरूले भरिएको छ।
स्यानशिन मंडप सदाको लागि जापानमा अवस्थित थियो।
यसमा प्रत्येक वस्तुको कम्तिमा सय वर्षको ईतिहास हुन्छ।
गाय र उसको पार्टी छाडे पछि, मून भगवानको मन शान्त हुन गाह्रो छ।
हलको अगाडि एक्लै उभिए।
उनको दिमागमा, मार्कले भनेको कुरा अहिले प्रतिध्वनि भयो।
विशेष गरी उहाँको हातमा तीन-जीवन डोरी देखे पछि, चन्द्रमा भगवान थरथर काँपनुभयो, यो शान्त गर्न कत्ति गाह्रो भए पनि।
अन्तमा, दुई आँखा स्पष्ट आँसु उनको आँखाको कुनामा पछि र चुपचाप पछाडि छोडिनुभयो।
"Yue'er, तपाईं उसलाई पछि सबै छोड्न सक्नुहुन्न?"
चंद्र भगवान sighed।
यो लामो सास मा, यो दया र असहायता को पूर्ण थियो।
देशको ईश्वरका रूपमा उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, र सर्वोच्च महिमा हुनुहुन्छ।
चंद्र भगवानले एक पटक सोच्नुभयो कि यस संसारमा कुनै पनि चीजले उनलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन।
तर अब यस्तो देखिन्छ कि उनी गलत थिइन।
मानिसका भावनाहरु उनको नियन्त्रण गर्न को लागी गाह्रो छ।
वर्षौंको अवधिमा, चंद्रमा भगवानले सोच्नुभयो कि उनको दिमागको प्रभावमा उनको शरीरमा लिiang्ग गोong यिंग्युको चेतनाले त्यो तातो गर्मीको केटा बिर्सनु पर्दछ।
यद्यपि, जब त्यो जवान मानिसको खबर फेरि देखा पर्‍यो, चंद्रमा भगवानले उनको शरीर भित्र मुटुको छेड्ने कुरा स्पष्ट रूपमा महसुस गर्नुभयो।
"शिक्षक, मलाई माफ गर्नुहोस्।"
"म वास्तवमै मास्टरलाई छोड्न सक्दिन।"
"म वास्तवमै यो गर्न सक्दिन।"
"र गुरुज्यू, तपाईंले किन भन्नुभयो गुरुले मलाई सान्सेng्ग डोरी फर्काइदिनुभयो।"
“ती कुरा उनले भने, हो
उसले मलाई बिदाइ गरिरहेको छ? ” "ऊ कता जाँदैछ?"
"ऊ खतरामा पर्नेछ?"
"शिक्षक, म उसलाई भेट्न चाहन्छु, म गुरुलाई भेट्न चाहन्छु।" बाट
चंद्रमा दिमागको गहिराई, Haruhi Yingyue को आवाज आयो।
आज, उनीहरूको चेतना संगै छ।
Haruhi Yingyue चन्द्र देवता संग मिल्छ, एक मास्टर र प्रशिक्षुको रूपमा पनि।
हालका वर्षहरूमा, Haruhi Yingyue शान्त छ।
पछिल्लो पटक त्यहाँ त्यस्तो कडा मुड स्विing्ग भएको थियो, मैले थाहा पाए कि मार्क अमेजन वर्षावनमा खसेका थिए।
अर्को समय, यो अब हो।
यो केटीको मुटुमा मार्क कती महत्वपूर्ण छ भनेर पनि हेर्न सकिन्छ।
यद्यपि, Haruhi Yingyue को अनुरोध को सामना मा, चंद्रमा भगवान स्पष्ट इन्कार गर्नुभयो।
"Yue'er, आत्म-इच्छुक नहुनुहोस्।"
"कुनै पनि समयमा, आफ्नो पहिचान र स्थान नबिर्सनुहोस्।"
"तपाईं र उहाँ बीचको सम्बन्ध कस्तो प्रकारको छैन।"
"तर अब तिमी जापानका देवता हौ।"
"म कसरी एउटा कडा तातो गर्मीको केटा हेर्न जान सक्छु?"
“तथापि, मलाई डर छ कि मेरो मालिक खतरामा छ, र मलाई डर छ कि म फेरि यस्तो कहिल्यै देख्ने छैन। शिक्षक, म तपाईंलाई बिन्ती गर्दछु, कृपया मलाई राम्रो जान दिनुहोस्, म एउटा झलक लिनेछु। जबसम्म उहाँ ठीक हुनुहुन्छ, म सन्तुष्ट रहनेछु। ” लिiang्ग गोong यिंग्यु अझै पनि जान दिन सक्दैनन्, कसरी उनको मनमा चिन्ता र लालसा।
"तपाईंले बिर्सनु भयो कसरी तपाईंले मलाई पहिले गर्नुभएको थियो?"
"म यसलाई अन्तिम पटक भन्नेछु, उहाँलाई बिर्सनुहोस्।"
"तपाईसँग बिभिन्न तरीका छन्, र तपाईले भविष्यमा षडयन्त्र गर्नुपर्दैन।"
“र, उसले यसपटक यहाँ कसैलाई पठाएको छ। यो एकदम स्पष्ट छ। ”
विभाग शहरी रोमान्स ट्याग एक डिश सर्वश्रेष्ठ सेवा चिसो, एक डिश सर्वश्रेष्ठ सेवा चिसो उपन्यास सेवा, एक डिश सर्वश्रेष्ठ सेवा चिसो उपन्यास, एक डिश सर्वश्रेष्ठ सेवा चिसो उपन्यास चीनियाँ, एक डिश सर्वश्रेष्ठ सेवा चिसो उपन्यास यी प्रशंसक, मुक्त, उपन्यास
Thoughts विचार "अध्याय २१ Best 3--२१3252० एक डिश उत्तम सेवा चिसो उपन्यासको"
जुन 28, 2021 मा 7: 29 AM
हा उपन्यास समाप्त भयो वा हामी लेखक मात्र अल्छी ????
जुन 27, 2021 मा 3: 32 AM
Cuánto timpo más tenemos que esperar para ver nuevos capítulos?
जुन 26, 2021 मा 12: 22 AM
ग्रेसियास पोर लॉस क्याप्टुलोस सिगो एस्पेरान्डो ला प्रिक्सिमा रियालिटीज्यासीन